Akụkọ Bible: Ndị Nledo Iri na Abụọ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE mkpụrụ osisi ndị ikom ndị a bu. Legodị ka ụyọkọ vaịn nke a si dị ukwuu. Ọ chọrọ ndị ikom abụọ iji buru ya n’okporo osisi. Leekwa mkpụrụ fig na mkpụrụ pọmigranet ndị ahụ. Ebee ka ọmarịcha mkpụrụ osisi ndị a si? Ha si n’ala Kenan. Cheta na Kenan bụ ebe Ebreham, Aịzik, na Jekọb biri na mbụ. Ma n’ihi ụnwụ nri nke dara n’ebe ahụ, Jekọb na ezinụlọ ya kwagara Ijipt. Mgbe ihe dị ka narị afọ abụọ na afọ iri na isii gasịrị, Mozis duuru ụmụ Izrel na-alaghachi Kenan. Ha abịarutewo otu ebe n’ọzara, nke a na-akpọ Kedesh.
Ndị ajọ mmadụ bi n’ala Kenan. N’ihi ya, Mozis zigara ndị nledo iri na abụọ, wee sị ha: ‘Chọpụtanụ mmadụ ole bi n’ebe ahụ, na otú ha siruru n’ike. Chọpụtanụ ma ala ahụ ọ dị mma ịkụ ihe ọkụkụ. Hụkwanụ na unu wetara ụfọdụ mkpụrụ osisi ndị na-amị n’ala ahụ.’
Mgbe ndị nledo ahụ laghachiri Kedesh, ha gwara Mozis, sị: ‘Ọ bụ ala mara mma n’ezie.’ Iji gosi na ihe ha kwuru bụ eziokwu, ha gosiri Mozis mkpụrụ osisi ụfọdụ. Ma mmadụ iri n’ime ndị nledo ahụ sịrị: ‘Ndị bi n’ebe ahụ gbara dimkpa ma dị ike. Ha ga-egbu anyị ma anyị nwaa iwere ala ha.’
Ụmụ Izrel tụrụ egwu mgbe ha nụrụ nke a. Ha sịrị: ‘Ọ gaara akara anyị mma ma a sị na anyị nwụrụ n’Ijipt ma ọ bụ n’ọzara ebe a. Ha ga-egbu anyị n’agha, dọrọkwa ndị inyom anyị na ụmụ anyị n’agha. Ka anyị họpụta onye ndú ọhụrụ ga-anọchi Mozis, ka o duru anyị laghachi Ijipt!’
Ma mmadụ abụọ n’ime ndị nledo ahụ tụkwasịrị Jehova obi, ha gbalịkwara ịgba ha ume. Aha ha bụ Jọshụa na Keleb. Ha gwara ha, sị: ‘Unu atụla egwu. Jehova nọnyeere anyị. Ọ ga-adị mfe iwere ala ahụ.’ Ma ụmụ Izrel egeghị ntị. Ha chọrọ ọbụna igbu Jọshụa na Keleb.
Nke a were Jehova iwe nke ukwuu, o wee sị Mozis: ‘Ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ha site n’onye gbara afọ iri abụọ gaa n’ihu, nke ga-aba n’ala Kenan. Ha ahụwo ọrụ ebube niile m rụrụ n’Ijipt nakwa n’ọzara nke a, ma ha atụkwasịghị m obi. N’ihi ya, ha ga-awagharị n’ime ọzara afọ iri anọ, ruo mgbe onye ikpeazụ ha nwụrụ. Ọ bụ naanị Jọshụa na Keleb ga-aba n’ala Kenan ahụ.’
Ọnụ Ọgụgụ 13:1-33; 14:1-38.
Gịnị ka ị chọpụtara banyere ụyọkọ mkpụrụ fig dị na foto a, ebeekwa ka e si bute ha?
N’ihi gịnị ka Mozis ji ziga ndị nledo iri na abụọ na Kenan?
Gịnị ka ndị nledo iri kwuru mgbe ha na-akọrọ Mozis ihe ha jetara?
Olee otú ndị nledo abụọ si gosi na ha tụkwasịrị Jehova obi, gịnịkwa bụ aha ha?
N’ihi gịnị ka Jehova ji wee iwe, gịnịkwa ka ọ gwara Mozis?
Gụọ Ọnụ Ọgụgụ 13:1-33.
Ole ndị ka a họọrọ ịga ledoo ala ahụ, ohere ọma dịkwa aṅaa ka ha nwere? (Ọnụ Ọgụ. 13:2, 3, 18-20)
N’ihi gịnị ka echiche Jọshụa na Keleb ji dị iche na nke ndị nledo ndị ọzọ, gịnịkwa ka nke a na-akụziri anyị? (Ọnụ Ọgụ. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kọr. 5:7)
Gụọ Ọnụ Ọgụgụ 14:1-38.
Ịdọ aka ná ntị dị aṅaa banyere ịtamu ntamu megide ndị na-anọchite anya Jehova n’elu ala ka anyị kwesịrị ịṅa ntị na ya? (Ọnụ Ọgụ. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kọr. 10:10)
Olee otú Ọnụ Ọgụgụ 14:24 si egosi na Jehova nwere mmasị n’ebe ohu ya nke ọ bụla nọ? (1 Eze 19:18; Ilu 15:3)